“၅အောင်စ သာသာလောက် ငှက်လေးတစ်ကောင် မြေပုံလမ်းညွှန်ပေါင်း ၁၀,၀၀၀ လောက်ကို ဘယ်လိုများ မှတ်သားထားကြလဲ” | Curiosity Science Magazine
July 27, 2016 · by Thar Htet Aung	· in Life Science.	·
Year2Issue4ပါ ကိုဝေယံထွဋ်၏ဆောင်းပါး
သင် ပါကင်မှာ သင့်ကားကို ရှာမတွေ့ တာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ ဖူးရင် ငှက်တွေကတော့ သင့်ကို လှောင် ရီနေမှာပါ။ ဒီငှက်မျိုးစိတ်တစ်ကောင်ဟာ လွန်ဆုံးရှိမှ ၄၊ ၅ အောင်စပါပဲ။ သူတို့ ရဲ့ ဦးနှောက်တွေဆိုတာလဲ တကယ်တမ်းကြ ထွေထွေထူးထူး ရှိလောက်မှာမဟုတ်။ ဘုရားရေ…။ အယ့်ဒါဆိုရင် ဒီငှက်လေးက ဘာများလုပ်နိုင်သေးတုန်း။ တော်တော်လေး အံ့အားစရာပါပဲ။
Clark’s Nutcracker ဆိုတဲ့ သစ်တောက်ငှက် မျိုးစိတ်ဆိုရင် တမူထူးဆန်းစွာနဲ့ မြေပုံပေါင်း ၅ဝဝဝ ကနေ ၂ဝဝဝဝ လောက်ထိကို မှတ်သားနိုင်စွမ်း ရှိကြပါတယ်။ မှတ်သားထားတဲ့ လမ်းကြောင်းတွေဟာ တိကျတယ်၊ အသေးစိတ်တယ်၊ အချိန်မရွေး ပြန်ထုတ်သုံးလို့ လည်း ရပါတယ်။ နှစ်စဉ် သြဂုတ်လလောက်ဆို ရင် သစ်စေ့တွေကို စတင်သယ်ဆောင်ကြပါပြီ။ သယ်လာတဲ့ အစေ့တွေကို (လေ့လာချက် တခုအရ အစေ့ပေါင်း တစ်သိန်းနီးပါးလောက် ရှိနိုင်ပါတယ်) သစ်တောထဲမှာ၊ မြက်ခင်းတွေကြားထဲမှာ၊ သစ်ပင် ချောင်ကြိုချောင်ကြားတွေမှာ ဖွက်ထားတက်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့နေရာတွေကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို အထက်အောက် ဘေးဘယ်ညာ သေသေချာချာ ပျံသန်းကြည်ရှုပြီးရင်တော့ အမှတ်အသားလေးတွေ မှတ်သားထားကြလိုက်တာပါပဲ။ ဒီမှာမှတ်တယ်၊ ဟိုနေရာမှာ မမှတ်ထားဘူး၊ မဟုတ်ဘူး.. ဟိုဘက်ဘေးမှာ စသဖြင့် ကြည့်တက်ကြပါတယ်။ အဲဒီ့လိုမျိုးကို ၂ မိုင်၊ ၃ မိုင်လောက် ပတ်ပတ်လည်မှာ လုပ်ထား တတ်ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နောက် ၉ လလောက်ကြာတဲ့ ထိ အဲ့ ဒီ့ အမှတ်အသား ထားထားတဲ့ နေရာကို မှတ်မိနေပါတယ်။ ဘယ်လိုများ မှတ်သားထားကြပါလိမ့်။
တစ်မိနစ်ကို ၃၂ စေ့ နှုန်း ထင်ရှူးအဖြူပင်တွေ စသီးပြီ၊ ခူးလို့ ရအောင် မှည့်ပြီဆိုတာနဲ့ အဲ့ ငှက်လေးတွေက နွေရာသီမှာ လုပ်ငန်းစပါတယ်။ အဲ့ ငှက်လေးတွေက တစ်ပင်နဲ့ တစ်ပင် ကူးတာတော်တော်လေး မြန်ပါတယ်။ သူတို့ နှုတ်သီးနဲ့ သေသေသပ်သပ်ကို ဆိတ်ပြီး၊ အထဲကအစေ့ကို တစေ့ချင်းထုတ်ယူကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင် မြန်လဲဆိုရင် တစ်မိနစ်မှာ ၃၂ စေ့ ရအောင် ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စားဖို့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ လှောင်ထားဖို့ သပ်သပ်ပါ။ မြောက်အမေရိက ရှဉ့်လေးတွေ၊ ပုံမှန်တွေ့ နေကြ ရှဉ့်လေးတွေ လုပ်သလိုပေါ့။ သူတို့ က ရသမျှကို လုံးထည့်ပြီး လျှာအောက်က ပါးစောင်ထဲမှာငုံပြီး သယ်သယ်သွားကြတာပါ။
Stephen Vander Wall နဲ့ Russel Balda တို့ရဲ့ “Co-adaptations of the Clark’s Nutcracker and the Pinon Pine for Efficient Seed Harvest and Dispersal” စာအုပ်မှာတော့ သူတို့ ပါးစောင်ထဲမှာ အစေ့ ပေါင်း ၉၂ စေ့ ခန့် အပိုအလို နောက်ထပ် ၈ စေ့ခန့် လည်း ထပ်ထည့်နိုင်ပါသေးတယ် လို့ ရေးသားထားတာ တွေ့ ရတယ်။ ဇီဝဗေဒ အမျိုးသမီး ပညာရှင် ဒန်နီယာ တွန်ဘက်က “ကျွန်မအထင် ဒါ နည်းတောင်နည်းနေသေးတယ် ၊ တခေါက်ဆို အစေ့ ၁၅၀ လောက် ထည့်ထားတဲ့ ငှက်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ ခဲ့ တာ၊ တော်တော်လေး ဆရာကျပါပေတယ်” လို့ သူမ အတွေ့ အကြုံကို ပြောပြပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ သူတို့ တွေ နေရပ်ကို ပြန်လာကြမယ်။ တခါတလေ မြေကြီးပေါ်နဲ့ သစ်ရွက်အောက်တွေကြားမှာ အပေါက်လေးတွေကို နှုတ်သီးနဲ့ ဖောက်တယ်။ တချို့ ဆို သစ်ပင်ထိပ်ဖျားမှာ အပေါက်ဖောက်ပြီး ဝှက်တက်ကြတယ်။ ကျင်းတခုကို ၃စေ့ ၄ စေ့လောက် ထားတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လို့ ပဲ နွေရာသီကနေ နိုဝင်ဘာလကို တဖြည်းဖြည်းကပ်လာတာနဲ့ အမျှ ငှက်တစ်ကောင်က နေရာပေါင်း ၅ဝဝဝ ကနေ ၂ဝဝဝဝ လောက်ထိ လုပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ က တော်တော်လေးအေးတဲ့ အထိ မရပ်သေးကြပါဘူး။ “သူတို့ က အစေ့ ဝှက်တဲ့ အလုပ်ကို တော်တော် သဘောခွေ့ နေတဲ့ သူတွေပါ” လို့ တွန်ဘက် က ပြောပါတယ်။ အခုလိုရာသီ ဒီဇင်ဘာလ ရောက်လာပြီဆိုရင် သစ်ရွက်တွေလည်း ကြွေပြီဆိုတော့ ဝှက်တဲ့ အလုပ်ကနေ ရှာတဲ့ အလုပ်ကို စပြောင်းပါတော့တယ်။ ခုထိတော့ ဘယ်ပညာရှင်မှ ငှက်တွေဟာ ဝှက်ထားတဲ့နေရာတွေ ဒီလောက်များကြတာကို တစ်ကောင်နဲ့ တစ်ကောင် မမှားကြအောင် ဘယ်လိုစီစဉ်ထားကြတယ် ဆိုတာ သက်သေမပြနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်နိုင်ချေကတော့ အဲ့ဒီ့ငှက်ဟာ စပြီးတွင်းတူးခါစက တွင်းဘေးနားမှာရှိတဲ့ အမှတ်အသားတခုခုကို သေသေချာချာ မှတ်သားထားတဲ့ ပုံပါ။ ပြောရရင်တော့ ပုံစံအတည်တကျမရှိတဲ့ ကျောက်တုံး၊ ချုံပုတ်၊ သစ်တုံး စသဖြင့်ပေါ့။ မှတ်ထားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ သို့မဟုတ် မှတ်သားတဲ့ ငှက်တွေဟာ သူတို့ ဝှက်ဝှက်ထားတက်တဲ့ နေရာနဲ့ မတူညီတဲ့ ထောင့်တွေထောင့်တွေ အသီးသီး ကွဲပြားသွား ကုန်ကြမှာပါ။
ဆက်ပြီးတော့ သူတို့ အတိုင်းအတာ၊ အတွက်အချက်လုပ်ငန်း စပါတော့မယ်။ တွန်ဘက် ပြောပုံအရတော့ သူတို့ဟာ သူတို့ ရဲ့ဝှက်ကြွင်းတွေက အရာဝတ္ထု(၁) ရဲ့ ဘယ်လောက်အကွာမှာ ရှိတယ်၊ အရာဝတ္ထု (၂) ရဲ့ ဘယ်အကွာအဝေးမှာ ရှိတယ်၊ အရာဝတ္ထု(၃)ရဲ့ ဘယ်လောက်အကွာမှာ ရှိတယ် ဆိုပြီး သူတို့ ဝှက်စဉ်က မှတ်သားထားတာတွေ အကုန်လုံးကို တြိဂံတွက်နည်းနဲ့ အဖြေထုတ်လိုက်တာပါ။ “ဒါမျိုးလုပ်ဖို့ ဆိုတာလည်း သူတို့ ခေါင်းထဲမှာ အဲ့ အရာတွေအကုန်လုံးကို ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ထားသလို မှတ်သားထားနိုင်ခြင်းကြောင့်ပါ” လို့ တွန်ဘက်က သူမရဲ့ တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ ကိုးကားရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင် အလန်ခမ်မီ ကတော့ အဲ့ ဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်မျိုးတွေးပါတယ်။ သူက “ငှက်တွေဟာ မြေမြင်အမှတ်အသားတွေကိုပဲ မှတ်သားထားနိုင်ကြပြီး အကွာအဝေးတွေကိုတော့ သေချာမမှတ်မိနိုင်ကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ မှတ်သားထားတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ထောင့်တွေ ထောင့်တွေကိုတော့ မှတ်နိုင်ကြပါတယ် ( ဥပမာ။ ။ ကျောက်တုံးရဲ့ တောင်ဖက် ၈၀ ဒီဂရီက သစ်တုံး.. စသဖြင့်)။ ဒီသစ်တောက်ငှက်မျိုးဟာ အတိုင်းအတာထက် မြေပြင်ပထဝီနည်းကိုပဲ အားကိုးတာပါ” လို့ သုံးသပ်ပြထားပါတယ်။
သူတို့ ဘယ်နည်းပဲ သုံးသုံးပါ၊ နှင်းကျလာရင်တော့ သိမ်းထားသမျှထုတ်စားဖို့ နဲ့ နားခိုဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။ “သူတို့ လေးတွေက သစ်ပင်ပေါ်က ခပ်နိမ့်နိမ့်ကိုင်းတွေမှာ အိပ်တန်းတက်ကြတယ်၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြေပြင်ကို ဆင်းဆင်းလာတယ်၊ အောက်ရောက်တာနဲ့ ဘေးဘယ်ညာ ကြည့်ပြီး စတူးတော့တာပဲ။ ကျွန်မကြည့်နေတုန်းကတော့ သူတို့က ဘယ် ညာကို သိပ်များများစားစား မရွေ့ လျားကြဘူး ရတာနဲ့ အပေါ်ချက်ချင်း ပြန်တက်ကြတော့တာပဲ” လို့ တွန်ဘက်က ပြောပြပါတယ်။ သူတို့ အားလုံးက နွေရာသီကနေ တောက်လျှောက်မှတ်သားထားတဲ့ အမှတ်အသားတွေကို လုံးဝမှတ်မိနေတယ်ဆိုတာ သူမယုံကြည်ပါတယ်လို့ တွန်ဘက်က ပြောပါတယ်။ “မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပဲ သူတို့ အားလုံး ကိုယ်ပိုင်အစေ့ တွေယူပြီး ကိုင်းပေါ် ပြန်ပြန်တက်လာကြပါတယ်။ တကယ့်ကို အံ့မခန်းပါပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။
၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေတုန်းက စတီဖင် ဗင်ဒါဝေါ လုပ်တဲ့ စမ်းသပ်ချက်တွေထဲမှာ သူ့ဘာသာ လုပ်ယူထားတဲ့ အချို့အချက်တွေ တွေ့ ရှိခဲ့ တယ်။ သူက ငှက်တွေမှတ်ထားတဲ့ အမှတ်အသားတွေကို တချို့ နေရာတွေကို ရွှေ့ ထားလိုက်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လို့ ငှက်တွေက သူတို့ အစာရှိတဲ့ နေရာတွေကို ရောက်မသွားဘဲ အရင်သူတို့ သိမ်းထားတဲ့ နေရာကိုသာ တွေ့ တယ်ဆိုပြီး ဖြစ်သွားတာမျိုး ရှိခဲ့ ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ထင်ထားသလို ငှက်တွေဟာ တွက်ချက်ပြီး အစေ့ ရှိရာကို ရောက်မသွားတော့ဘူးပေါ့။
ဒါပေမဲ့ သူက အစေ့ကိုပဲပြောင်းပြီး သူတို့ မှတ်ထားတဲ့ ဟာတွေကို မပြောင်းပဲ ထားထားလိုက်တော့ ငှက်တွေဟာ သူတို့ အမှတ် အသားရှိရာတွေကိုတော့ ရောက်အောင် သွားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဒီငှက်တစ်ကောင်ဆီက သူတို့ ရဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော အမှတ်အသားလုပ်ထားတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီးလိုအပ်လာလျှင် လပေါင်းများစွာထိ ကြာအောင် အချိန်မရွေး ပြန်လည်အသုံးချ နိုင်ကြပါတယ်။
နွေဦးပေါက်လာတဲ့ အခါ သူတို့ လည်းသားပေါက်ပြီး ငှက်ပေါက်လေးတွေ ရလာတောင်မှ သူတို့ လေးတွေ အတောင်မစုံမချင်း အရင်ကသိမ်းထားတဲ့ နေရာတွေ သွားသွားပြီး အစေ့တွေ သွားသွားထုတ်နေဆဲပါ။ ဖြေရှင်းမရသေးတဲ့ ကိစ္စ၊ တကယ်နက်နဲတဲ့ ကိစ္စကတော့ သူတို့ တွေ ဒီလောက် ထောင်သောင်းချီတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လိုများ သိမ်းဆည်းကြသလဲ။ ကျွန်တော်တောင် သူတို့ လို မျိုး မမှတ်မိနိုင်သေးပါဘူး။ (ဂဏန်း ဆယ်လုံးပါတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တောင် မမှတ်မိချင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်သာ အဲ့ဒီ့ငှက်ဆိုရင် သေတာကြာပေါ့။) သူတို့ ရဲ့ ဦးနှောက်တွေက အကောင်းဆုံးဆိုသော စနစ်တခုခုနဲ့များ သိုလှောင်ထားတာလား။
သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်တွေက ပလက်စတစ်တွေနဲ့ များ ဖွဲ့စည်းထားတာလား။ လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ ချိတ်ဆက်စဉ်းစားဖို့ နာဗ်ကြောတွေ ပိုတိုးပွားလာလို့ လား။ တေးသီငှက်တွေဟာလည်း သူတို့လို စုဆောင်းတာပါပဲ၊ သူတို့ ဦးနှောက်တွေက ရာသီစက်ဝန်းတွေအကြောင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ လမ်းကြောင်းတွေ အတွက် လိုအပ်လာရင် တဖြည်းဖြည်း အရင်ကထက် ဖွံ့ ဖြိုးလာတက်ကြပါတယ်။ အခုသစ်တောက်ငှက်တွေကလည်း ဒီလိုပဲ လုပ်ကြတာလား။ ကျွန်တော်တို့ မသိကြသေးပါ။ သူတို့ ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ သူတို့ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ ဆိုတာတော့ သိချင်ပါရဲ့။ ။
Ref: K. Robert. Howa5-Ounce Bird Stores 10,000 Maps in its Head. National Geographic Article. (3.12.2015).
External link: http://phenomena.nationalgeographic.com/2015/12/03/how-a-5-ounce-bird-stores-10000-maps-in-its-head
← မှော်ပညာ စိတ်ဝင်စားပါသလား။ သိပ္ပံပညာကို လေ့လာပါ
တွင်းနက်(Blackhole) ဆိုတာ ဘာလဲ →